Max Allegri oo Lacag aad u badan kula biiri kara kooxda Barcelona!!!
Sunday, June 24th, 2018 - 17:49:01
Wednesday April 19, 2017 - 10:26:04 in Wararka by Muuse Cabdi
MAX ALLEGRI ayaa la kulmay kooxda Barcelona Agaasime ka tirsan, kaasoo ay kulan ku qaateen Portuguese-ka magaalada ku taalla ee Porto si ay uga wadahadlaan in uu noqdo macallinka xiga ee Nou Camp, sida ay sheegayaan wararka laga helayo Italy.
Tababaraha kooxda Juventus— ayaa sidoo kale waxaa beegsaneysay Arsenal — waxaase uu hadda ka mid noqday dhowr macallin oo lagu arkay diiwaanka Luis Enrique ka beddelaya shaqada kooxda Catalonia.
Premium Sport ayaa warinaya in Barca ay dooneyso in ay lacag xad dhaaf ah siiso ninkan, Ariedo Braida ayaana ugu yaboohay Allegri sanadkiiba Mushaar dhan £7.2milyan, xilli uu ka mid noqonayo macallimiinta dhanka Mushaaraadka ugu fiican.
Labadaan nin ayaa horay usoo wada shaqeeyay, ka hor Nou Camp waxaana Agaasimahaan uu qariyay AC Milan in ay wada joogeen sanadkii 2010-ka.
Kulanka ayaa la warinayaa in uu dhacay February 22-keeda ka hor inta aysan Juventus 2-0 uga badin kooxda Porto ciyaar ka dhacday Estadio Dragao oo ka tirsaneyd Champions League.
Allegri ayaa sidoo kale bartilmaameed ka ah Emirates si uu beddel ugu noqdo Arsene Wenger, xilli la filayo in macallinka reer Faransa uu shaqada ka tegayo.
Horyaalkiisii 3-aad ee Serie A ayuu qaadayaa isagoo hogaaminaya, Juventus waxaana uu sidoo kale filayaa in uu la qaado 3-da koobba sanadkan.
Kooxda Bianoconeri ayaa joogta finalka Copppa Italia waxayna sidoo kale 1 tilaabo u jirtaa Champions League semi-finalkiisa keddib markii ay soo garaacday Barcelona oo lagu dhuftay 3-0.
Waxaa uu hadda wajahayaa Nou Camp oo uu tegayo Arbacada, waxaana jira wadahal uu kula jiro kooxda halkaas ku ciyaarta.
Tan iyo markii uu kusoo biiray Juventus 2014, Allegri ayaa hantay 6 ka mid ah 7-da tartan ee uu ka qeybgalay ee dalkiisa — waxaana koobka kaliya ee uu ku fashilmay uu yahay Supercoppa Italia Xagaagii tegay.